Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Tsy nahomby ny fanarenana ny dia an-habakabaka any Eropa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Gresy • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ireo firenena nanjavona faran'izay ratsy indrindra dia ireo izay miankina bebe kokoa amin'ny fizahan-tany lavitra, toa an'i Frantsa sy Italia ary ireo izay namepetra ny fameperana be dia be sy mora vidy toa an'i Angletera, izay nilatsaka tamin'ny faran'ny lisitra, nahatratra 14.3% fotsiny Ambaratonga 2019.
Ny fitsangatsanganana an'habakabaka eropeana dia nahatratra 39.9% amin'ny ambaratonga mialoha ny pandemika.
Nifangaro ny sary, miaraka amin'ny toerana itodiana sasany manao tsara kokoa noho ny hafa.
Nihena ny famandrihana tamin'ny faran'ny vanim-potoana fahavaratra.
Ny fikarohana vaovao dia nanambara fa ny sidina iraisam-pirenena mankany amin'ny toeran-tany Eoropeana tamin'ny volana Jolay sy Aogositra dia nahatratra 39.9% amin'ny ambaratonga mialoha ny pandemika. Tena tsara lavitra noho ny tamin'ny taon-dasa (izay 26.6%), raha ny valan'aretina COVID-19 dia nikatona fanidiana lehibe; ary mbola tsy nahazo fankatoavana ireo vaksiny.
Na izany aza, nifangaro be ny sary, miaraka amin'ny toerana itodiana sasany manao izay tsara lavitra noho ny hafa. Ary koa, tsy mivoatra ny fomba fijery, satria nihena ny famandrihana tamin'ny faran'ny vanim-potoana fahavaratra.
Mijery ny fampisehoana isaky ny firenena, Gresy no niavaka. Nahatratra 86% ny fahatongavan'ny volana jolay sy aogositra tamin'ny taona 2019. Narahin'i Sipra, 64.5%, Torkia, 62.0% ary Islandy, 61.8%. I Gresy sy Islandy dia iray amin'ireo firenena voalohany nanao fanambarana marobe fa hanaiky ireo mpitsidika nanao vaksiny feno sy / na afaka naneho fitsapana PCR ratsy ary / na afaka nanaporofo ny fahasitranany tamin'ny COVID-19.
Ireo firenena nanjavona faran'izay ratsy indrindra dia ireo izay miankina bebe kokoa amin'ny fizahan-tany lavitra, toa an'i Frantsa sy Italia ary ireo izay namepetra ny fameperana be dia be indrindra sy mora miovaova toa ny UK, izay reraka teo amin'ny faran'ny lisitra, nahatratra 14.3% amin'ny ambaratonga 2019 fotsiny.
Tsy misy ireo mpitatitra mora vidina, ny sidina intra-eropeana dia nahatratra 71.4% ny olona tonga, raha 57.1% ny taona 2019. Ny fanjavonan'ireo mpitsidika lavitra, izay mazàna no mijanona ela kokoa, dia mandany bebe kokoa ary mampifantoka ny sainy amin'ireo tanàna sy fitsangatsanganana. voasoritra amin'ny laharam-pahamehana amin'ireo toerana tsara indrindra sy ratsy toerana eto an-toerana.
Nandiso fanantenana manokana ny dia nankany Londres; teo amin'ny farany ambany amin'ny lisitr'ireo tanàna eropeana be olona indrindra, nahatratra 14.2% fotsiny tamin'ny fahatongavan'i 2019. Izany lisitra izany dia notarihin'i Palma Mallorca, toerana fitsangantsanganana lehibe ihany koa, nahatratra 71.5% amin'ny ambaratonga 2019 ary avy amin'i Athens, vavahady mankamin'ny nosy maro ao amin'ny Adriatika, 70.2%. Ny tanàna lehibe nahavita be manaraka dia ny Istanbul, 56.5%, Lisbonne, 43.5%, Madrid, 42.4%, Paris, 31.2%, Barcelona, ​​31.1%, Amsterdam, 30.7% ary Roma, 24.2%.
Raha ampitahaina dia hita fa natanjaka kokoa ny toeran'ireo fialam-boly. Ny laharam-pahamehana amin'ireo toeran-dehibe rehetra any an-toerana (izany hoe: ireo manana anjaran-tsena mihoatra ny 1%) dia anjakan'ny toerana mafana fety any amoron-dranomasina na ny vavahady mankany amin'izy ireo. Ny mpitarika dia Heraklion sy Antalya, izay nihoatra ny 5.8% sy 0.5% isan-karazany talohan'ny areti-mifindra. Nanaraka azy ireo i Tesalonika, 98.3%; Ibiza, 91.8%; Larnaca, 73.7% ary Palma Mallorca, 72.5%.
Ankoatry ny fironana makro, ny toeran-kaleha sasany dia toa tsara kokoa na ratsy kokoa noho ny antony manokana eo an-toerana. Ohatra, Portugal, izay toerana ankafizin'ny mpanao fialantsasatra any UK, dia nijaly rehefa nanova ny fanondroana azy tamin'ny maitso ho amber tamin'ny volana jona i UK; ary Espana dia nijaly tamin'ny faran'ny volana Jolay rehefa nampitandrina ny amin'ny fitsangatsanganana rehetra i Alemana.
Rehefa heverin'ny olona fa mampatahotra ny fizahan-tany any Eropa tamin'ny taon-dasa, ity fahavaratra ity dia tantara fanarenana kely tokoa. Nasiana mari-pahaizana tamin'ny ora mahazatra, ny fihenan'ny sidina iraisam-pirenena mitohy, latsaky ny 40% amin'ny mahazatra, dia nanimba be ny indostrian'ny fiaramanidina. Ny tsy fisian'ireo mpandeha lavitra, indrindra ny Far Atsinanana (nahatratra 2.5% fotsiny ny volan'ny pre-pandemika tamin'ity fahavaratra ity) dia hanaporofo ny famelezana ny toekarem-pizahàn'ny firenena eropeana maromaro.
Raha misy singa fampiononana dia ny olona "mijanona", izany hoe: manao fialantsasatra any amin'ny fireneny. Na dia manana ampahany vitsy an'isa amin'ny tsena any Eropa aza ny sidina fiaramanidina amin'ny vanim-potoana mahazatra, dia nahomby kokoa izany nandritra ny areti-mandringana satria tsy niharan'ny fameperana fitsangantsanganana sarotra toy izany. Ohatra, ny Canaries sy ny Balearics dia nandray mpitsidika espaniola betsaka kokoa noho ny tamin'ny vanim-potoana ara-dalàna.